‘शुसाशन, आत्मसम्मान र विकास एवम् समृद्धी’ - Yatra Daily
Home बिचार/अन्तर्वार्ता ‘शुसाशन, आत्मसम्मान र विकास एवम् समृद्धी’
‘शुसाशन, आत्मसम्मान र विकास एवम् समृद्धी’
आगामी अशोज २ गते हुने प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचनमा वीरगन्ज महानगरपालिकावाट मेयर पदमा संघीय समाजवादी फोरम नेपालले विजय सरावगीलाई अगाडी बढाएको छ । सरावगी समाजसेवावाट खुला राजनीतिमा आए लगतै समाजमा गरेको सराहनीय कार्यहरुले राजनीतिमा अनि रम्दै गएका छन् । उनको चुनावी योजना तथा विकास योजनाको सेरोफेरोमा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अँश :
तपाईको जीवजनको यो पहिलो राजनीतिक निर्वाचन हो, एकै पटक वीरगञ्ज माहानगर जस्तो ठाउँको मेयरको टिकट हात पार्न सफल हुनु भयो । के कौशल लगाउनु भयो ?
– यो पहिलो राजनीतिक निर्वाचन मेरो लागि हो, सहि कुरा हो । राजनीति कसको लागि गरिन्छ ? समाजका लागि होइन् र ? समाजिक क्षेत्रमा मेरो सक्रियता वीरगन्जले हेरोको छ । मैले धेरै वटा सामाजिक मञ्चहरुमा नेतृत्वदायि भुमिका गरेको छुँ । जसमा सफलता पनि पाइयो । राजनीतिक दलहरुको भुमिका भनेको सक्षम नेतृत्वको खोजि र विकास पनि हो ।े जिम्मेवारी दिएर जुन आपेक्षाले पार्टीले मलाई मेयरको लागि अगाडी सारेको छ, त्यो म पुरा गर्नेछुँ । स्थानीय तहको बिकासमा पार्टीको भुमिका हुनुपर्छ र त्यसको लागि यो चुनाव नै एक मात्र माध्यम हो । हामी चुनाव जित्छौं र वीरगन्जको विकास र समृद्धीको लागि लिएको सपना पुरा गर्छौं ।
तपाईका चुवानी अजेण्डा के के हुन् ?
– मेरा चुनावी अजेण्डा चुनावी मात्र होइनन्, सम्पुर्ण कार्यकालको लागि हामीले एउटा कार्यसूची बनाएका छौं । त्यसलाई नगरवासीमाझ पस्केर चुनावमा गइरहेका छौं, जनताले हाम्रो योजना र विचारलाई अनुमोदन गरेर जिताउने छ भन्ने बिश्वास छ । त्यसपछि वीरगन्जमा पारदर्शी र द्रुत किसिमले भौतिक विकासका कामहरु अगाडी बढाउने छौं ।
माहानगर कार्यालय र माहानगरभित्र रहेका बिभिन्न सरकारी सेवाप्रदायक निकायको काम, कारवाही र सेवालाई प्रभावकारी, जनमैत्री र पारदर्शी बनाउछौं । वीरगन्जवासीको लागि स्थानीय स्तरमैं आय आर्जनको अवसर बढीभन्दा बढी सृजना हुने गरी यहाँ योजनाहरु ल्याइने छ । शिशुदेखी बृद्धबृद्धासम्मको आत्मसम्मान तथा संरक्षणका लागि माहानगरमार्फत नै ब्यवस्था गर्ने सोंच छ । शहरी गरिबीलाई न्युनिकरण गर्दै लैजाने प्याकेज कार्यक्रम कार्यन्यवन गरिने छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाई जस्ता आधारभुत कुराहरुमा सुधारको नगरवासीले तुरुन्त परिवर्तनको अनुभुति गर्न पाउने छन् ।
पारदर्शी र द्रुत किसिमले भौतिक विकासका कामहरु अगाडी बढाउने भनेको के हो ? अलि प्रस्ट पारिदिनुस न !
– विकास निर्माणका कामहरुमा नगरमा कस्ता असन्तोस देखिन्छ छरपस्टै छ । सडक, ढल आदीमा बजेट खर्चिन्छ, प्रतिफल राम्रो आउदैन् । पारदर्शी भनेको सबैले जान्ने, बुझ्ने र चाँसो राख्न पाउने गरी विकास निर्माणका योजनाहरु कार्यन्वयन गर्ने हामीले सोंचेका छौं । लामो समय लगाएर नगरवासीलाई विकास निर्माणको नाममा दुख दिनेभन्दा छिटोछरितो काम सम्पन्न गर्ने शैलीको लागि माहानगरले निगरानी राख्ने छ ।
बनेका संरचनाहरुको गुणस्तरमा सम्झौता गरिदैन्, विकास बजेट अप्रत्यक्ष रुपमा जनताकै पैसा हो, त्यसबाट एक रुपैया पनि दुरुपयोग नहोस भन्ने ध्येय रह्ने छ । वीरगन्जका सारा सडकहरुको सुधार र स्तरोन्नती, सिर्सिया करिडो, पुर्वपश्चिम नयाँ लिंक रोडहरु, चक्रपथ, उतरदक्षिण जोड्ने नयाँ मार्गहरुको निर्माण गरिने छ । वीरगन्ज माहानगरमा आएको नयाँ क्षेत्रमा सडक र नालाको बिशेष विकास प्याकेज लागु गर्ने काम पहिलो प्राथमिकतामा रह्ने छ ।
चुनावमा दिने प्रतिबद्धता पछि कार्यन्वयन भएको देखिदैन्, तपाईका प्रतिबद्धताहरु पुरा गर्नु हुने छ भनी कसरी विश्वास गर्ने ?
– राजनीति मेरो लागि पेसा वा आर्जन गर्ने माध्यम होइन् । सेवाको माध्यम मात्र हो । र, मैले सेवा काममा समर्पित गरेर गर्ने गरेको छँु, जसका केही जिवन्त उद्हारण छन् । तपाईलाई याद होला वीरगन्जको त्यो ऐतिहासिक योग विज्ञान शिविर । योगऋषी रामदेव जी माहाराज र आयुर्वेद ज्ञाता बालकृष्ण जी माहाराजलाई वीरगन्जमा ल्याएर पाँच दिने शिविर वीरगन्जमा सफलतापुर्वक संचालन गर्नु चानचुने कुरा थिएन् । तपाई हेर्नु भएको होला सिद्धार्थ विद्यालय त्यसको कायापलट गर्न हामी सफल भएका छौं, श्रीपुर वडा प्रहरी कार्यालय र अलौंस्थित सशस्त्र प्रहरीको बोर्डडर आउट पोष्ट कार्यालय नमुना रुपमा बनाउनु जस्ता दर्जनौं काम मैले मेरो नेतृत्वमा गरेर देखाएको छुँ ।
हो, तर यस पटक मैले आँटेको् काम धेरै बृहद र बिशाल छ । त्यसैले त मैल आँटेको काम गरेर देखाउने आफैसंग चुनौति लिएको छुँ । चुनावमा जितेकै्र दिन त्यो चुनौतिसंग मेरो साक्षातकारको सुरुवात हुने छ । त्यसपछि नगरवासीले भन्ने छन् –‘विजय सरावगी गरेर देखाउने मान्छे हो ।’
घोषणा त गरियो, तर माहानगरीय परिवेसको वीरगन्जमा केही पनि छैन् । त्यसतो माहानगरको तपाई मेयर बन्ने प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ । अगाडीको बाटो सजिलो छ त ?
सजिलो छैन् अगाडीको बाटो, कठिन छ । त्यसैले कठिनाईलाई हामीले चुनौतिको रुपमा स्विकारेका छौं । वीरगन्जमा ढल र नालाको ब्यवस्थापन गर्नु पर्ने छ । फोहोर मैलाको ब्यवस्थापन चुनौतिपुर्ण छ । सहरलाई हराभरा बनाउने कार्यक्रम ल्याइने छ । सहर भनेको बाताबरण मैत्री हुनुपर्छ, कंक्रिटको जंगल बनाउने होइन् । उद्यन, फुटपाथ सबैलाई ब्यवस्थित र योगाकेन्द्रहरुको स्थापना गर्ने हो । खेल मैदानहरुको समबद्र्धन र विकास गर्ने हो । सहरको सौन्दर्यकरणमा ध्यान दिने हो, मल, सपिङ कम्प्लेक्स र सहरीय चहलपहल किनमेल बढाउने केन्द्रहरुको स्थापना गर्ने छौं । शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको ‘हब’को रपमा वीरगन्जलाई विकसित गर्ने हो । महिला र बालबालिकाका लागि सरकारले लिएका नीतिहरु मात्र कार्यन्यवन गर्न सके उपलब्धी हुने छ । अनेक कामहरु हाम्रो सूचीमा छन् ।
तपाईको आफ्नो ब्यपार हेर्नु हुन्छ कि माहानगर ?
– मैले मेरो ब्यपारिक प्रतिष्ठानमा कार्यहरुलाई प्रणालीगत र संस्थागत गरेको छुँ । त्यो अब स्वचलित छ । त्यसलाई चलायमान बनाइ राख्ने सहकर्मीहरु संस्थासंग छन् । मलाई मेरो ब्पपार कसरी चल्छ भन्ने रती भर चिन्ता छैन् । हो, त्यसतै स्वचलित प्रणाली र संस्थागत विकास अहिले वीरगन्ज माहानगरलाई खाँचो छ । सेवाग्राहीले त्यहाँबाट पाउने सेवा र कार्यालयले सम्पादन गर्ने विकास निर्माणदेखी बिभिन्न निर्णयका कामहरुले मानिसहरुले साँच्चिकै आधुनिक, प्रविधियुक्त र जनमैत्री माहानगर नगरवासीलाई मैले अनुभुति गराउने छुँ ।
Previous articleनेता विजय सरावगीको घरदैलोमा जनलहर बढदै
Next articleपर्सा एमालेले उम्मेदवारको नाम सार्वजानीक